အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး အင်တာနက်စင်္ကြန်စတင်လွှင့်တင်ခြင်း | consumer
Home » ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသတင်းများ » အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး အင်တာနက်စင်္ကြန်စတင်လွှင့်တင်ခြင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး အင်တာနက်စင်္ကြန်စတင်လွှင့်တင်ခြင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ကုန်စည်တင်ပို့ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အင်တာနက်စင်္ကြန် (www. easeoflogistics . com) ကို အိန္ဒိယပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (FIEO) က ၂၇-၉-၂၀၂၁ နေ့၌ စတင်လွှင့်တင်လိုက်ပါသည်။
အိန္ဒိယပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အဆိုပါအင်တာနက်စင်္ကြန်မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်သေတ္တာလိုအပ်ချက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အဆိုပါအင်တာနက်စင်္ကြန်မှ တစ် ဆင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်္ဘော လိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကလည်း ၎င်းတို့ပေးနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းများကို ပြန် လည်ကမ်းလှမ်းလျက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် FIEO ၏ သတင်းထုတ်ပြန် ချက်၌ ဖော်ပြပါသည်။
FIEO ကုန်သည်အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Dr A Sakhtivel က ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ထိရောက်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့အသင်းချုပ်အနေဖြင့် ကုန်တင်သင်္ဘောလိုင်းများ၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဘက်စုံသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး လုပ်ကိုင်သူများအပါအဝင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုနယ်ပယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကူအညီများရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုစင်္ကြန်အား လွှင့်တင်ချိန်၌ပင် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် ၁၈၀၀ ကျော်နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ ၃၀၀ ခန့်တို့သည် ဝင်ရောက်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ် သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ဤအင်တာနက် စင်္ကြန်မှတစ်ဆင့် ကုန်သေတ္တာဈေးကွက် လိုအပ်ချက် ကို ကျယ်ပြန့်စွာ တွေ့မြင်နိုင်မှုနှင့်အတူ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် သင့်လျော်သည့် ဈေးနှုန်း ဖြင့် ကုန်သေတ္တာရရှိနိုင်ရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ အနေဖြင့်လည်း ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို သိရှိ နိုင်မှုအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ကုန်သေတ္တာများအား ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ စက်ကိရိယာ များ တပ်ဆင်နိုင်ရေး စီစဉ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး ကောင်စီများက FIEO ၏ ယခုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကြိုဆိုလျက် ၎င်းတို့၏ အသင်းဝင် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အဆိုပါစင်္ကြန်၌ ဝင်ရောက်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့ကြကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။
FIEO ၏ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အင်တာနက်စင်္ကြန်၌ ဖော်ပြထားရှိမှုအရ ၃၀-၉-၂၀၂၁ နေ့ နံနက်ပိုင်းအထိ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ၂၀၉၆ ခု၊ သင်္ဘောလိုင်းနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၄၁၇ ခုတို့ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကုန်သေတ္တာလိုအပ်ချက်ရှိ ကြောင်း ထုတ်ဖော်တင်ပြချက် ၇၅၅၂ ခုကို လွှင့်တင်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။